कठै हाम्रो देश - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
कठै हाम्रो देश
निर्वाचन विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ भ्रष्टचार मुद्धामा सजाए पाएकाहरुले कुनै पनि निर्वाचन लड्न पाउँदैनन् भनेर । तर, त्यो नियमलाई लत्याउँदै भ्रष्टचार मुद्धामा जेलको चिसो हावा खाएका कांग्रेसका केहि नेता निर्वाचन लड्ने उम्मेदवारहरुलाई कुनै बाधा पु¥याएको छैन भन्दै अझै भ्रष्टाचार गर्न ठुला पदमा पुग्न जोर जुलुम गर्दैछन ! यो देख्दा अच्चम्मै लाग्छ ! उल्टै पार्टीभित्र भ्रष्टचार मुद्दामा सजाय पाएका र नैतिक आचरण पतन भएकाले समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने लबिङ सुरु गरिएको छ भने यो विषय निर्वाचन विधेयक संसद्को विधान समितिमा छ ! कांग्रेस भ्रष्टाचारीलाइ पनि चुनाबमा उठ्न पाउनु पर्ने भनेर बिधयक पास गराउन उद्दत छ भन्ने कुरा आउँदा हामी छक्क परेका छौं ! नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो ! भ्रष्टाचारी र नैतिक पतन भएकाले पनि आगामी हुने सांसद् र प्रदशे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँनुपर्छ भन्दै काँग्रेसका १९ सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए । हामी हाम्रो भाग्य निर्माण गर्ने हो भने यस्ता बिषय पार्टीबाट हटाउनु पर्छ ! पार्टीमा नै भ्रष्टाचारीलाई स्थान दिनु हुँदैन !
अब हामी र हाम्रा सन्ततिको भविष्य गुणस्तरीय बनाउनका लागि जनतामा नै व्यावहारिकता आउनुपर्दछ । चियापसलमा आआफ्नो दल र नेताका पक्षमा एकोहोरो वकालत गर्दै बसेर यो देशको विकास हुँदैन । चियापसलमा गरिने बहसले चिया व्यवसायी मोटाउलान्, तर देश मोटाउन सक्दैन । आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गर्नका लागि राजनीति अवरोध नबनोस् । सही लक्ष्य, योजना र कार्यक्रमहरुका निमित्त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होस् । सही र गलत छुट्याउन नसक्ने जनता दाससरह हुन्छन् । इतिहासका राम्रा व्यक्ति र पक्षहरुलाई अनुशरण गर्दै जनता नै सामाजिक अभियानमा गैरराजनीतिक रुपमा अघि बढ्न सकेमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी नेताहरु यो देशबाट उन्मूलन हुनेछन् । अस्ति भर्खरै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेपालका न्यायलयदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म राजनीतिले नराम्रोसँग गाँजेको डरलाग्दो विषय राजधानीको एक कार्यक्रममा बताउनु भयो । काभ्रेको हुक्सेमा जन्मिएका पत्रकार हरिबहादुर थापाको पुस्तक ‘रजगज’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले सबैले खुलेर विरोध नगरेसम्म भ्रष्टाचार नहट्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले पूर्व प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आफूले के बोल्न हुने, के बोल्न नहुने भन्ने नै थाहा नभएको भन्दै व्यंग्यात्मक शब्दमा बोल्दै डाक्टर गोविन्द केसीको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा आलोचना भएको ,भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्ध आवाज उठाउँदा आफू पटकपटक राजनीतिक दलहरुको तारो बनेको, प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा संसदीय सुनुवाईमा महिनौं झुलाइए पनि आफूले कुनै सम्झौता नगरेको कार्यक्रममा बताए बाटै थाह हुन्छ यो देशको हालत के रहेछ ।
नेपालमा इमान्दारपूर्वक काम गर्नेलाई जहिले पनि समस्या पर्ने, इमान्दार बन्छु, म घुस खान्न, र जनताको सेवा गर्छु पनि भन्न नपाइने अवस्था छ ! भ्रष्टाचारले समाजमा धनी र गरिबको बीचमा खाडल बन्दै गएकोछ । अब युवा पुस्ता सचेत नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने घरघरबाट भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ! सबै जागरुक बनौ भष्टाचारको अन्त्य गर्ने अभियानमा जुटौं !